Garoonka Libya oo la qabsaday. - BBC News Somali
Garoonka Libya oo la qabsaday.
24 Agoosto 2014
Image caption Maleeshiyada Libya oo dagaallamaya.
Koox Islaam ah oo xullufo la ah maleeshiyo isku baheystay dalka Libya, ayaa la sheegayaa in ay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee caasimadda Tripoli, kaddib markii uu halkaasi dagaal ku dhex maray iyaga iyo koox kale oo hubeysan.
Sawiro la soo geliyey baraha bulshada ee Internetka ayaa muujinaya rag hubeysan oo ku dabaaldagaya diyaarad dusheeda banaanka guri burburay.
Barlamaanka cusub ee Libya ayaa cambaareeyey falka maleeshiyadaasi.
Afhayeen u hadlay maleeshiyada ayaa sheegay in barlamaanka cusub uu yahay sharci-daro, waxa uuna ku baaqay in dib loo soo celiyo gollahii qaran ee hore ee ka arriminayey dalkaasi oo ay ku badnaayeen kooxaha islaamiga ah.
Weriyaha BBC-da ee Libya, ayaa sheegaysa in ay jiraan warar aanan la xaqiijin oo tilmaammaya in ay weli dagaallo ka socdaan duleedka caasimadda, iyo in sidoo kale la maqlayo qaraxyo.
Garoonka lagu soo waramay in lala wareegay waxay caqabad ku tahay maleeshiyo ka soo jeeda gobolka Zintan, oo gacan saar la leh Jeneraal Khalifa Haftar, oo isagu bilaabay ololo ka dhan ahaa waxa uu ugu yeeray dowladda ay ka buuxaan islaamiyiinta.
Kooxdan ayaa gacanta ku haysay garoonka muddo ku dhow saddex sano.
Libya waxa hareeyey dagaalo u dhaxeeya maleeshiyo iska soo horjeeda oo markii hore ka qeyb qaatay dagaaladdii xukunka looga tuuray hoggaamiyihii hore Macamar al-Qadaafi sannadkii 2011-kii.